Zvese nezve hunhu hwenzvimbo dzekati | Noti Katsi
Zvese nezve hunhu hwenzvimbo yekatsi
Makati ane nzvimbo yakanyanya. Kunyangwe murume ane hushamwari hwakanyanyisa uye hwemagariro anokwanisa kudzivirira iwo mamita epasi aanofunga kuti ndeake, anogona kunyange kurwira kana achiona zvakakodzera. Ichi chinhu icho, kana iri yega furry iri mumba, isingawanzo kukonzera chero dambudziko, kana kwete chero rakakomba, asi panouya katsi yechipiri, mamiriro acho anove akaomarara.
Kune zvatiri nhengo itsva yemhuri, kune shamwari yedu "yekare" inodiwa maroja, mutorwa zvachose ari kupinda mumba mako. Kuchinja pfungwa dzako kunotora nguva uye moyo murefu, dzimwe nguva kushivirira kwakawanda. Sei? Kupindura uyu mubvunzo, Ndiri kuzokuudza zvese nezve nharaunda inzvimbo yekatsi.
1 Chii chinonzi feline ndima uye yakakamurwa sei?
2 Ndeipi nzvimbo inoda kati?
3 Unomaka sei ndima?
3.1 Inogona kudzivirirwa?
4 Tingakubatsira sei kuti unzwe wakasununguka pamba?
5 Zvekuita kana kati yakanyanya kuita nharaunda
6 Iyo miganhu yenharaunda yesango kana semi-yemahara katsi
7 Katsi inomaka rini nharaunda yayo?
8 Mabasa emamaki mukitsi
Chii chinonzi feline ndima uye yakakamurwa sei?
Iyo feline ndima ndeye seti yenzvimbo dzinoitirwa mamwe mabasa, ayo anogona kuve akawandisa kana kushomeka zvichienderana, pamusoro pezvose, pazera rekati uye ingave isina neutered kana kwete. Idzi nzvimbo ndidzo:
Chiitiko nzvimbo: apa kati inoita mabasa ayo ezuva nezuva: idya, tamba, zorora pachayo ... Iyi nharaunda yakakamurwa munzvimbo dzakasiyana, kuitira kuti, semuenzaniso, kudya kupatsanurwe kubva pakubvisa.
Kusurukirwa nzvimbo: iyi nharaunda inoshandiswa kushandisa imwe nguva uri wega, kungave kurara kana kuti ubve pane izvo zviri kuchikonzera panguva iyoyo kushungurudzika.
Mhirizhonga zone: apa kati inogona kupedzisira yarwisa kana ikaona zvakakodzera.
Idzi nharaunda nhatu dzakabatana nemakwara, ayo furry ari kuumba kubva pazuva rekutanga raanobuda kunze. Ivo havamboputsa, kunze kwekunge mhuri yafamba kana imwe kati, yakasimba kudarika iye, inomudzingira kunze kwenharaunda, chimwe chinhu chinoitika pakati pevanhu vane furry vanogara vachigara mumugwagwa.
Ndeipi nzvimbo inoda kati?
Katsi dzisingatombo buda mumba dzine ndima inotsanangurwa: imba yacho pachayo; asi avo vanoenda kunze "vanotonga" nzvimbo yakakura kwazvo. Iyi nzvimbo yakakura kana iri katsi dzechirume dzisina neutered, nekuti ndidzo dzinoenda kunotsvaga hadzi. Katsi dzisiri-neutered zvakare dziri kure (1 kana 2 mabhuroko), asi iwe unogara uchidziwana dziri pedyo nekwavanowana chikafu.
Kana iri katsi idzo dzisina neutered, iyo nzvimbo yavanoda yakanyanya kushoma. Muchokwadi, ini ndinogona kukuudza kuti vanhurume havawanzo kutsauka vanopfuura mumwe mugwagwa, uye vanhukadzi vanowanzove nemhando ingangoita mazana mana kana mazana mashanu emamiriyoni.
Unomaka sei ndima?
Iyo katsi inoratidza nzvimbo yayo nenzira dzakasiyana:
Uine weti: pamatanho akatwasuka.
Nezvikwenya: fenicha, makushiro, nezvimwe.
Kusvina zvinhu: Aya ndiwo maratidziro aunoita maziso ako pheromones.
Iwe une rumwe ruzivo nezve iyi nyaya pano.
Aihwa. Katsi inoda, nehunhu hwayo, kutara nharaunda yayo. Chatinogona kuita kuidururira isati yave nekupisa, nekuti nenzira iyi tichazvidzivirira kubva kumaka neweti uye, sezvinei, marara asingadiwe. Izvo zvinodawo kuti isu tikupe iwe chinokanganisa (kana akati wandei) kuitira kuti ugone kuchengeta nzwara dzako dzakapinza.
Tingakubatsira sei kuti unzwe wakasununguka pamba?
Pamusoro pekukupa iwe iyo iyo kutarisirwa kwekutanga, pane zvinhu zvinoverengeka zvatinofanira kuita kudzivirira kushamisika kusingafadzi uye, sezvinei, kumuita kuti anzwe kugadzikana uye kufara nesu. Tichifunga nezvekuti dunhu rayo rakakamurwa kuita matunhu akasiyana, izvo zvatinofanira kuita ndezve isa chikafu chako nemvura pamwe chete, asi kure nebhokisi remarara.
Matoyi ake, chinokwenya, uye kunyange mubhedha wake unofanira kunge uri mune imwe kamuri munogara mhuri. Semuenzaniso, horo kana imba yekutandarira. Nenzira iyi anogona "kuvhima", kunyangwe hazvo achigadzira, achigadzirisa hunyanzvi hwemhuka yake.
Pakupedzisira, zvakakosha kuti uve nenzvimbo yaunogona kuzorora. Mune ino kamuri iwe unofanirwa kugona kunyarara, pasina kukanganiswa nemunhu.
Zvekuita kana kati yakanyanya kuita nharaunda
Ivo vedu vanogara nekatsi vanoziva kuti iyo "yemusango" chikamu chinogara chichigara kwavari, kunyangwe hazvo uye nezano ratakupa, vanogona kuchinjika kwazvo kumba uye kugara nemhuri. Kana iwe ukapa pekugara, chikafu, mvura, uye yakawanda rudo, kati yako inonzwa kunakidzwa yakakukomberedza.
Asi midzi yayo yakadzika midzi inoita kuti ive nenharaunda yemhara iyo inonzwa kunge yayo uye kuti hapana anogona kuyambuka. Kunyangwe iri hunhu hwakajairwa sezvatatsanangura pamusoro, zvakakosha kuti uzive kuti kana ikava katsi yenzvimbo zvakanyanya inogona kutiunzira matambudziko, kunyanya kana tiine zvipfuyo zvakawanda kana kana tichida kuzviisa mumhuri yedu.
Iyo miganhu yenharaunda yesango kana semi-yemahara katsi
Iyo katsi yekumba inoziva painogumira (madziro eimba), asi katsi dzesango kana katsi dzinogara musemi-rusununguko dzinogona kuwedzera miganho yadzo sekutaura kwatataura pamusoro. Izvo zvinhu zvinosanganiswa munzvimbo dzenzvimbo dzezviito zvinoenderana pamusoro pesimba ravo sosi.
Katsi ichagara padhuze nepane chikafu uye nemvura, uyezve kana paine katsi dzakawanda dziri padyo, kunyanya mune iyo katsi dzinotsvaga hadzi kuti dzibate. Kazhinji, katsi dzechirume dzinowanzove nenharaunda yakakura kupfuura yevakadzi uye dzimwe nguva vanogona kugovana ndima, asi kazhinji zvinokonzeresa kukakavadzana pakati pevanhurume vasina kutemwa munguva dzekupisa.
Katsi inomaka rini nharaunda yayo?
Iyo katsi inoratidzira dunhu rayo kune vamwe uye neayo pachayo. Saka vamwe vanozoziva kuti iyi ndiyo ndima yavo uye zvakare, zvakare kuzviziva. Inonyanya kushandisa mavara ekuona uye anoninipisa: kukwenya, weti ...) Naizvozvo, katsi yekumba inoda kubvarurwa uye kuti katsi yechirume isatarise pese pese, zviri nani kumukanda.
Mabasa emamaki mukitsi
Izvo zvinodikanwa kuti uzive kududzira mamaki ekitsi, nekuti hazviwanzo zvine chekuita nenharaunda yavo. Pane nguva apo aya mabhenji ane chimwe chinangwa chaunofanira kuziva:
Matunhu enharaunda, maka kuvapo kwavo munzvimbo, sezvatatsanangura muchinyorwa chose.
Alarm mamaki. Zvinoitika kana kati ichinzwa kushushikana zvakanyanya nekuda kwechimwe chikonzero. Inowanzoitwa nemasaga eshure.
Kujairira mamaki kana kuzivikanwa. Chikamu chemuviri wako chakadai semusoro kana musana chinowanzo kukwizwa kusiya hwema pamunhu kana chinhu chaunofunga kuti hachina hwema hwako uye kuti unofanira kuchimaka. Kunyangwe iwe uchikwanisawo kuzviita nekungoratidzira rudo rwako kune zvimwe zvisikwa.
Pamusoro pekucherechedzwa kwataurwa pamusoro apa, katsi inokwanisa kutara nharaunda yayo nedzimwe nzira: kuburikidza nekutaurirana kwechinyakare (auditory: meowing and purring) uye visual (zvinzvimbo zvekumaka simba senge kurara kumusana kwayo kuratidza dumbu kana zvikamu zvaro, kunyangwe kukanda. vamwe vanoita bonde).
Ndinovimba iwe wadzidza zvakawanda nezve nharaunda yenzvimbo yemakati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Zvese nezve hunhu hwenzvimbo yekatsi
Rocío Martinez akadaro
Mhoro. Ndiri kuenda kune rimwe guta uye ndinoda kuziva kuti ndinoita sei kuti kati yangu ichinje uye isarasika. Ane makore mana uye neutered. Ndine imbwa mbiri dzakashata dzandinogara nadzo mukuwirirana kwoushamwari. Ndatenda Rocçio
Pindura Rocío Martínez
Kutanga, isa chishongo chine ndiro yekuzivisa uye iyo microchip, kana isina iyo. Hauzomboziva zvinogona kuitika.
Zvino, ini ndinokurudzira kuzvichengeta kumba kweinenge mazuva mana (zvine musoro pavhiki) pasina kubuda. Munguva iyoyo, iwe unozodzidza kuti ino inzvimbo yako yakachengeteka, kwaunowana chikafu chako, mvura, uye nemhuri yako.
Zvino, kana iwe uchizoiburitsa, ngazvive zvishoma zvishoma. Kutanga rega atarise kunze kwewindo rakavharwa, wobva wamusimudza ndokuenda naye kunze, uye pakupedzisira murege aende ega.
Chero zvazvingaitika, kana ukaenda kune rimwe guta, hazvikurudzirwe kuti kati ibude, sezvo paine njodzi dzakawanda.
Kana iwe uchida zano rekufamba, ini ndinokukoka iwe kuti uverenge ichi chinyorwa.
Chii chandinoita kana ndikawana katsi pamusuwo wemba yangu?
Kittens ingadya rini?